Maalinta AIDS-ka adduunka ee sanadkan 2019 ee la xusay toddobaadkan ayaa hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay muujisay isbeddelka ay bulshooyinku saameynayaan si loo soo afjaro jeermiska HIV AIDS . Hay’adda ayaa dhinaca kale indhaha caalamkana ku soo jeedisay baahida loo qabo in si weyn looga wada qeyb qaato xoojinta daryeelka caafimaadka aasaasiga ah.
Dalka Soomaaliya oo uu xanuunka HIV ka jiro ayay hoos u dhacday tirada dadka la nool oo ay ka hoos martay halkii ay markii hore taagneyd ee ahayd boqolkiiba hal.
Hase ahaatee, xanuunka HIV ayaa halis weyn ku haya carruurta yar yar ee Soomaaliyeed ee aaney waalidkoodna qabin HIV AIDS, taasoo uga imaaneysa goobaha caado dhaqameedka wax lagu daweeyo.
Tirada carruuta ay da’doodu ka yar tahay 14-ka sano ee la nool viruska HIV ayaa lagu qiyaasaa inay u dhexeyso 1100-1800 sida lagu xusay daraasadda guddiga qaabilsaln Aidska ee koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhakhaatiirka ka howgala magaalada Muqdisho ayaa VOA u sheegay in uu aad uga naxay markii uu ogaaday sida uu xanuunka ku qaaday wiil Lix sano jir ah oo qaba xanuunka HIV AIDS oo uu kula kulmay xaruntiisa caafimaadka. Wiilkaas oo labadiisa waalidba ay ka fayowyihiin xanuunkan.
Caasho Ibrahim Aden ayaa Dr. Dufle ka wareysatay halka uu ilmahasi yar ka qaaday xanuunka, iyo sida looga hortagi karo khataraha noocaas oo kale ah.
Dhageyso Wareysiga Dr. Dufle ee Dalqo Goynta iyo HIV/AIDS